Howlgalo shabaab ka dhan ah oo Shabeelada Hoose laga fuliyay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Howlgalo shabaab ka dhan ah oo Shabeelada Hoose laga fuliyay
Howlgalo shabaab ka dhan ah oo Shabeelada Hoose laga fuliyay
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaay Howlgalo aminga lagu xaqiijinayay ka sameeyeen degaano hoostaga Magaalada ee Xarunta Shabeelada hoose.
Howlgalka ayaa waxaa hoggaminayay Guddoomiye kuxigeenka Magaalada Marka ahna Taliyaha Nabadsugida degmadaas Maxamed Sheekh Xasan, waxaana laga sameeyay degaannada, Gaarilow, Farange iyo Shufeyari ee duleedka Magaalada Marka.
Taliyaha Nabadsugida degmada Marka Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa sidii looga hortegi lahaa weerarada Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan, wallow uusan shaacin dad ay ku qabteen howlgalka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ciidamada Ammaanka ee Magaalada Marka ay howlgalka sii wadi doonaan ilaa degaannada hoostaga Magaaladaasi laga saarayo Ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inay ka feejigan yihiin weerarada ay geystaan.
Previous articleMidowga Africa oo Maanta ka shiraya Xaaladda Soomaaliya
Next articleDowladda oo laga codsaday in ay dib u eegis ku sameyso xilliga uu billowdo bandowga habeenkii